हाम्रा पान्डा जि बेला बेलमा टि-टाइममा हसाउने खुराक ल्याउने गर्नुहुन्छ। म कु टाइममा आएर के गर्न खोजेको भन्नुभयो होला? त्यस्तो हसाउने खुराक केही लिएर नआएको भए पनि हास्ने खालको खबर लिएर आएको छु।
जनतालाइ बेला बेलामा स्विजरल्यान्ड देखी अमेरिकाको गफ दिन त सबै नेता माहिर छन। पंचायत आफै मात्र पार्टी अरु पार्टी हुनै नपाउने भए पनि बिकासको गफ त दिन्थ्यो है। गफै भए पनि पन्चायतको जस्तो बिकासको गफ अहिले सुन्न पाइन्न । सायद नेता हरु आफ्नै भुंडी बिकासमा लागेकोले होला जनतालाइ बिकासको गफ दिन नपाएका।
पन्चायतकालमा नेपाललाइ बिश्वको मापदण्डमा पुराउने भनेर खुबै ढोल पिटाए। जती ढोल पिटे पनि केही भएन त्यस पछि लाजै पचाएर अब चाही एसियाको मापदण्डमा नेपाललाइ पुराउने भन्न थाले। २०४६ सालमा सपनासंगै पन्चायत मसानघाटमा पुग्यो। त्यस पछि २०४७ मा भएको चुनाबमा घोषमा पत्रको बाडी नै आयो। पुर्व पस्चिम रेल मार्ग देखी कोशीमा पानी जहाज, खुब गफ चुटे नेताहरुले। चुनाब पछि त के कुरा,एमाले निस्किहाल्यो बिरोधमा, कांग्रेस आफै ३६ र ७८ भनेर क्रिकेट खेल्न थाले। गिरिजा पनि के काम,सबैलाइ नक आउट गर्दै बिचैमा चुनाब गरे। अनि सरु भयो पेन्डुलम सांसद। सांसदको पोइल गए जस्तो चारै तिर पोइल गएर संभव भए सम्मको सरकार बनाए। यसरी कमेडी शो मा देखिने सबै कुरा नेताले साच्चै कै गरेर देखाइदिए। हिजो सम्म फाटेको चप्पल लगाउने हरु पजेर चढ्दा पनि पैत्रिक सम्पती भन्नलाज नै छैन। अरु त के पुरुष सांसदले सुत्केरी खर्च सम्म लिएर हसाउनु हसाए।
हासो को श्रिंखलाको त के कुरा? हालै समाचारमा आयो, एउटा पार्टीले हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यलाइ संबिधान सभामा उठ्न आग्रह गरेछ। नेता को चरित्र देख्दा देख्दा वाक्क एक जनाले भनि हाले, नेता हरुले देश बिदेशसम्म आफैले हसाउने नपुगेर हरिबंशलाइ पार्टिमा ल्याएर अझै हसाउन खोजेका हुन?
सर कति हास्नु, दुनिया हासें।
अब के हुने हो, चिन्ताले रुनुपर्ने हो कि?
कुरो त ठिकै हो , राजनीति गर्ने सबै जोक्कर भए पछी , कलाकारले के गर्ने त?
अनि कलाकारले राजनीति गर्नु परेन त?